အကူအညီလိုအပျပါက အလံဖွူ၊ အလံဝါ ထောငျပါ၊ ကူနိုငျသူတှေ ဝိုငျးဝနျးကူညီကွပါ
HomeKnowledgeအကူအညီလိုအပျပါက အလံဖွူ၊ အလံဝါ ထောငျပါ၊ ကူနိုငျသူတှေ ဝိုငျးဝနျးကူညီကွပါ
ဘယျမွို့နယျမှာမဆို တဈကိုယျထဲသမားမြား၊ အကူအညီလိုတဲ့ မိသားစုမြား ဒီလိုလေး အလံဖွူလေးပဲဖွဈဖွဈ၊ အဝါလေးဖွဈဖွဈ ထောငျထားကွပါလား။ အားလုံး ကူနိုငျသူတှေ ဝိုငျးကူကွရအောငျပါနျော။
အကယျ၍ အစားအစာ နှငျ့ အကူအညီ လိုအပျခကျြမြား ရှိနပေါက... ! သငျ... ! နထေိုငျသညျ့ နရောတှငျ အလံဖွူကို လှငျ့တငျထားပါ။
မိမိကိုယျကို နှငျ့ သငျခဈြမွတျနိုးသူမြားအား ထိခိုကျစမေညျ့လုပျရပျမြား မပွုလုပျပါနှငျ့။ စိတျဖိစီးမှုကို ရှောငျကဉျြပါ။ အသနားခံရနျ ရှကျစရာ မလိုပါ။ အလံအဖွူရောငျကို လှငျ့ထူထားပါ။ တဈစုံတဈဦးမှ သငျ့အား ကူညီပါလိမျ့မညျ။
အဝါရောငျ သင်ျကတေကို သုံးပေးပါ။
ဒီ campaign ဟာ တောငျဥက်ကလာအတှကျ ရညျရှယျအကြုံးဝငျပါတယျ ။ အိမျရှိလူအကုနျ နမေကောငျးဖွဈပွီး အကူအညီအထောကျအပံ့ လိုအပျခဲ့ပါက အဝါရောငျနဲ့ ပတျသတျတဲ့ သင်ျကတေလေး မိမိအိမျရဲ့ပတျဝနျးကငျြရှိ လူမွငျသာတဲ့နရောမှာ ထုတျပေးထားပါ။
ဈေးဝယျဖို့ / ဆေးဝယျဖို့ သှားရလာရခကျခဲတာကအစ စားရေးသောကျရေး ခကျခဲသှားတာအထိ အကူအညီပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျပါတယျ ။
အဝါရောငျဟာ ပြျောရှငျခွငျးအရောငျမို့ ဒီအရောငျလေးပဲ သုံးပါရစေ ။ လကျထဲမှာ အလှူငှရှေိသေးတာမို့ ဒါကို မတညျ၍ တောငျဥက်ကလာရှိ yellow symbol ရှိတဲ့ အိမျလေးတှကေို အခငျြးခငျြး ကူညီပါမယျ။
အရငျ quarantine center တှကေိုတောငျ ပွညျသူအခငျြးခငျြး စားရေးသောကျရေး support ခဲ့တာမို့ ခုကိုယျ့အနီးအနား ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကို တခါပွနျကူညီပေးကွဖို့ တောငျးဆိုပါရစရှေငျ။
- ဒီစကားလေး လကျဆငျ့ကမျးပေးပါ ။
- ဒီ post ကလေး ပြံ့နှံ့စဖေို့ ပထမဆုံးအကွိမျ share ပေးဖို့လဲ ထပျတောငျးဆိုပါရစေ
ဘယျလမျးက ၊ ဘယျရပျကှကျမှာ yellow symbol အိမျကလေးရှိခဲ့ရငျ ကူညီနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ အလှူရှငျလဲ လိုအပျပါတယျ။ အခငျြးခငျြးပါဝငျကူညီပေးကွပါအုနျးနျော။
အားတငျးထားပါဦး ကြှနျမတို့ ကြျောဖွတျနိုငျမှာပါ။
အကူအညီလိုအပ်ပါက အလံဖြူ၊ အလံဝါ ထောင်ပါ၊ ကူနိုင်သူတွေ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါ
ဘယ်မြို့နယ်မှာမဆို တစ်ကိုယ်ထဲသမားများ၊ အကူအညီလိုတဲ့ မိသားစုများ ဒီလိုလေး အလံဖြူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဝါလေးဖြစ်ဖြစ် ထောင်ထားကြပါလား။ အားလုံး ကူနိုင်သူတွေ ဝိုင်းကူကြရအောင်ပါနော်။
အကယ်၍ အစားအစာ နှင့် အကူအညီ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေပါက... ! သင် ... ! နေထိုင်သည့် နေရာတွင် အလံဖြူကို လွှင့်တင်ထားပါ။
မိမိကိုယ်ကို နှင့် သင်ချစ်မြတ်နိုးသူများအား ထိခိုက်စေမည့်လုပ်ရပ်များ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အသနားခံရန် ရှက်စရာ မလိုပါ။ အလံအဖြူရောင်ကို လွှင့်ထူထားပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးမှ သင့်အား ကူညီပါလိမ့်မည်။
အဝါရောင် သင်္ကေတကို သုံးပေးပါ။
ဒီ campaign ဟာ တောင်ဥက္ကလာအတွက် ရည်ရွယ်အကျုံးဝင်ပါတယ် ။ အိမ်ရှိလူအကုန် နေမကောင်းဖြစ်ပြီး အကူအညီအထောက်အပံ့ လိုအပ်ခဲ့ပါက
အဝါရောင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သင်္ကေတလေး မိမိအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူမြင်သာတဲ့နေရာမှာ ထုတ်ပေးထားပါ။
ဈေးဝယ်ဖို့ / ဆေးဝယ်ဖို့ သွားရလာရခက်ခဲတာကအစ စားရေးသောက်ရေး ခက်ခဲသွားတာအထိ အကူအညီပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
အဝါရောင်ဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းအရောင်မို့ ဒီအရောင်လေးပဲ သုံးပါရစေ ။ လက်ထဲမှာ အလှူငွေရှိသေးတာမို့ ဒါကို မတည်၍ တောင်ဥက္ကလာရှိ yellow symbol ရှိတဲ့ အိမ်လေးတွေကို အချင်းချင်း ကူညီပါမယ်။
အရင် quarantine center တွေကိုတောင် ပြည်သူအချင်းချင်း စားရေးသောက်ရေး support ခဲ့တာမို့ ခုကိုယ့်အနီးအနား ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တခါပြန်ကူညီပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေရှင်။
- ဒီစကားလေး လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ ။
- ဒီ post ကလေး ပျံ့နှံ့စေဖို့ ပထမဆုံးအကြိမ် share ပေးဖို့လဲ ထပ်တောင်းဆိုပါရစေ
ဘယ်လမ်းက ၊ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ yellow symbol အိမ်ကလေးရှိခဲ့ရင် ကူညီနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အလှူရှင်လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းပါဝင်ကူညီပေးကြပါအုန်းနော်။
အားတင်းထားပါဦး ကျွန်မတို့ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။